ArnDzidza Kutengesa | Mahara Forex Signals | Worlds Yakanakisa Kutengesa Chikoro
Bitcoin Dunhu Ongororo
Bitcoin Dhijitari Ongororo
Bitcoin Prime Ongororo
USD / CAD Iri Kuchinjika Pakati peMatanho 1.2500 uye 1.2640, Kutengesa Kumanikidza Zvichida
Nhanho dzeKuramba Nhanho: 1.4200, 1.4400, 1.4600Makiyi Ekutsigira Nhanho: 1.3400, 1.3200, 1.3000 USD / CAD Mutengo Wakareba-wenguva Muitiro: BearishUSD / CAD vaviri vari mune yekuderera. Vaviri vakaita pfupi uptrend kusvika padanho 1.2600 munaKurume 30. Kwevhiki rapfuura, kusimudzira kumusoro kwakakanganiswa padanho rapfuura. Padenga, kana vatengi vakatadza kutyora […]
Ethereum (ETH) Kuongorora Kwemutengo: Ether Inoenderera neRally Yayo sezvo Inotyora Kupokana pa $ 2,150 uye $ 2,200
Ethereum bulls break breakances at $ 2,150 uye $ 2,200Iyo huru altcoin yakaputsa kuramba padanho $ 2,300 Ethereum ETH) Statistics dzazvinoMutengo wazvino: $ 2,349.68Market capitalization: $ 270,957,376,500Trading Volume: $ 30,816,542,480Major supply zones: $ 2,000, $ 2,200 $ 2,400, $ 1,800 Ethereum (ETH) Kuongorora Mutengo Kubvumbi 51,600, 1,400 Vatengi vakaputsa iyo $ 14 uye $ 2021 kuramba seEther […]
US Dollar Inogara Kuneta Pakati Pekushayikwa Kwenguva muBritish Pound
Chipiri, April 13, 2021
Dhora reUS rakaramba rakaneta nezuro, kunyangwe hazvo zvibodzwa pamakore gumi-eUS zvisungo zvakasimuka zvishoma, uye kutariswa kwemusika kwakatendeukira kuCPI munaKurume. Ziva kuti US CPI kukura inotarisirwa kuwedzera munaKurume, uye kana izvozvo zvikaitika, zvinogona kuwedzera tarisiro yekuwedzera kumanikidza kwemitengo muhupfumi hweUS, iyo […]
Bitcoin Inotyora Nyowani Yese-Nguva Yakakwira Mberi kweiyo Coinbase Nasdaq Chinyorwa
NeCoinbase iri kutanga kuvhura ruzhinji rwayo paNasdaq mangwana, varimi vari kumucheto kwezvigaro zvavo kune zvavanotarisira kuti chingave chiitiko chakakura pakugamuchirwa kweBitcoin (BTC) uye mari yemadhora zvakawandisa. Ichi chiitiko chichava kekutanga munhoroondo kuchinjana kwemari yedhijitari yakakura se […]
US Wall Street 30 (US30USD) Inowira seMutengo Unosvika Chikamu 34000 Resistance Zone
Nzvimbo Dzakakosha dzeKuramba: 33000, 33500, 34000Key Rutsigiro Nzvimbo: 26000, 25500, 25000 US Wall Street 30 (US30USD) Yenguva refu Trendisheni: BullishUS30USD iri kudzoka mushure meiyo index yakaedzwa nhanho 34000 yekupikisa nzvimbo. Kunze kwezvo, iyo index irikutengesa munzvimbo yakawandisa yemusika. Chishandiso cheFibonacci chakaratidza shanduko inogona kuitika padanho rino. Zvichakadaro Kurume 18 […]
Tenga Croda yebasa rayo rakakosha muCovid mRNA majekiseni
Croda International (CRDA), kambani yemakemikari yeUK, inonzwika senge ine guruva maindasitiri - isingafadzi asi inowanisa mubhadharo uye mubhadharo wemabhadharo. Well Croda zvirokwazvo inobhadhara chikamu, kunyangwe iine yakaderera goho re1.7% uye mibairo yaro inoenderana uye inofungidzirwa, uye yanga iri pamusoro pekukura curve yeiyo […]
Spanish Mutero Chiremera Inopa Nyevero Tsamba kune Dzimba Cryptocurrency Vavaki
Hurumende yeSpain yatanga kusimbisa kuomarara kwayo cryptocurrency mamiriro, sezvo mutero wenyika mutero wakatanga kuita chiito. Mishumo inoratidza kuti Hacienda yakangoburitsa 14,800 yambiro tsamba kuvagari vakakundikana kana vachiri kuzivisa yavo crypto holdings. Yambiro yakataura kuti vanotadza kubhadhara vanowana mari inodarika zviuru zvishanu euros ($ 5,000). […]
USD / SGD Kuenderera Kwemhando!
USD / SGD yakadonhedza chaipo mushure mekunge iyo inflation yeUS yaburitswa asi inogona kudzoka yakakwira Inotengeswa pa1.3419 panguva yekunyora mushure mekuyedzazve zuva nezuva pivot ye1.3414. Kudzoreredzwa kwekumusoro neimwe nzira kunotarisirwa mushure mekutyora pamusoro peiyo huru downtrend mutsara. Vaviri ava vakagadzira katatu paH4 iyo […]
USDCHF Inoburitsa Pasi Mahara Akatenderedza 0.9200 Matunhu Pakati peUS Kukwira Kwehuwandu
USDCHF Kuongorora Mutengo - Kubvumbi 13 Mushure mekudonha kwemazuva mashanu akateedzana, vaviri veUSDCHF vanodzika pasi zvakatenderedza 5 kutanga kweChipiri chikamu cheEuropean / American. Kudzoka kwevaviri kuri kumusoro kwakatenderedza 0.9200 intraday yakakwira uye panguva yeiyi positi yakanga ichikomberedza yakatenderedza danho re0.9259. Dhora rekuUS iri mumamiriro akangwarira […]
USDMXN bouncing kubva Historic key level
Kutsigira Kakakosha: 20.00 Kuramba Kwakakosha: 20.55 - 20.90 -21.60 Iyo USDMXN yanga iri mukusimba kwakasimba kwazvo kweinopfuura mwedzi kubva payakadzika zvakare munaKurume 8. Thatsa -7.35% inofamba. Iyi nhanho zvakare iri 0.764 yekudzosera kumashure kwekupedzisira kwenguva refu kusimudzira kufamba. Zvakare, ino yekupedzisira-vhiki shanu bearish kufamba […]
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU Yakanyoreswa Kambani Kambani: 11746374
Tora Zviratidzo zveVIPDhipatimendi $ 250 Kuti Utore Mahara VIP Forex Zviratidzo zvegore rimwe! Trade pamusoro MT4 pamwe Leverage kusvika 1 500!